Nanolo-tena izahay mba hanome vokatra mendrika & fiarovana. Samy fikambanana tabilao sy ny workflow dia Powered by izany tanjona izany. Ny vokatra rehetra dia nandinika tsirairay alohan'ny fanondranana. Ny ankamaroan'ireo ny vokatra izay no lasa fitsapana ny havany angatahin'ny tsena eoropeanina sy Amerika Avaratra tsena, anisan'izany azo, cadmium, PAHs, HAMPIDIRANA votoaty, tonga, PHTHALATES, FORMALDEHYDE, EN13537, EN71, CPAI-84, CPAI-75, ISO5912.
Mirehareha izahay ny fikarohana sy ny fampandrosoana, izay manampy antsika mba hanome zavatra vaovao maro ho an'ny mpanjifa sy hanampy betsaka ny mpanjifa mba manana ny hevitra tanteraka.
Hoe iza isika amin'ny asa?
Ny tsara kalitao ny vokatra sy ny fomba fandraharahana mahatoky nahazo anay mpanjifa maro, anisan'izany ny Eureka, Nordisk, Red amboahaolo izany hoe: Obelink, E. Leclerc, Rusta, ALDI, UNHCR, liona iraisam-pirenena, avy amin'ny sampan-draharaha Miaramila amin'ny firenena ..., raha ny hevitrao no zava-dehibe ny ianao, masìna ianao, aza misalasala mifandray aminay!